मलेसियामा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाइ आयो दु:खद खबर ! – Dainik Samchar
May 5, 2021 385
काठमाडौ । भ्रमण भिसामा मलेसिया गएर उतै बसेका नेपालीहरुले अब तत्काल मलेसिया छोड्नुपर्ने भएको छ । स्वदेश नफर्केर मलेसियामै बसेकाहरुलाई त्यहाँको सरकारले यही वैशाख ९ गतेसम्ममा स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको छ । भिजिट भिसामा मलेसिया गएर विगत एक वर्षदेखि उतै बसेकाहरु अब मलेसिया बस्न नपाउने भएका हुन् । मलेसिया नछाडेका विदेशी नागरिकलाई २१ अप्रिल अर्थात् आगामी ९ वैशाखसम्म मलेसिया छाड्न त्यहाँको सरकारले निर्देशन दिएको हो। *** यो समाचार को भिडीयो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
रोजगारीको उद्देश्य लिएर भ्रमण भिषामा मलेसिया प्रवेश गरेकाहरुलाई पनि देश छोड्न भनिएको हो । २१ अप्रिलसम्म पनि मलेसिया नछोड्नेले त्यहाँको कडा अध्यगमन नियमानुसार कारबाही भोग्नुपर्ने मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। मलेसियाले भ्रमणमा जाने विदेशीलाई सुरुमा ९० दिनको भिसा जारी गर्ने गरेको छ । भ्रमण भिसामा गएर स्वदेश नफर्किनेको सङ्ख्या बढेपछि मलेसियाले यस्तो चेतावनी दिएको हो।*** यो समाचार को भिडीयो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **!
Prevपल शाहले शुरु गरे निशुल्क अक्सिजन अभियान, कोही नेपाली म’र्दैन अब अक्सिजन नपाएर !
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, बैशाख २३ गते बिहिबार , आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल